Diyaarad duqeysay Degmada Jilib ee Gobolka Jubbada Dhexe. – idalenews.com
Diyaarad Dagaal oo aan la ogeyn dalka laga leeyahay, ayaa Goor-Dhow Duqeyn ka fulisay Degmada Jilib ee Gobolka Jubbada Dhexe, halkaasi oo ay Kooxda Al shabaab ku sugan yihiin.
Qof kamid ah Dadka Deegaanka, ayaa warahiinta u sheegay isagaa Magaciisa codsaday inaan la shaacin in Duqeynta Diyaarad ay timid kadib markii Maleeshiyada Kooxda Al shabaab ay Rasaaseeyeen Diyaarada oo markaasi Joog Hoose ku duuleysay.
“Waxaan maqalnay Dhawaqa Hubka ay Diyaarada kusoo rideysay Koonfurta Degmada & Deegaano kale oo Al shabaab Saldhigyo ay ku leeyihiin, ma naqaano Diyaarada halka ay ka timid & Wadanka laga leeyahay, balse Xaaladda ayaa hadda waxa ay tahay mid kacsan waxaana Degmada soo galay Al shabaab badan,”ayuu yiri Qof degan Jilib.
Khasaaraha Duqeynta ayaan wali la ogeyn, iyadoo Degmada ay tahay Saldhiga ugu weyn Kooxda Al shabaab ee Gobolka Jubbada Dhexe, waxaana Sanadkii lasoo dhaafay lagu bartilmaameedaday Horjogiyaal sare oo ka tirsan Al shabaab.
Shacabka ayaa Cabsi soo wajahday, waxaan si aad ah loo hadal hayaa Duqeynta & in markale ay dhacaan Duqeymo kale, maadaama Degmada Jilib ay ku sugan yihiin Horjoogiyaal sare oo ka tirsan Kooxda Al shabaab.
Idale News Online, Jilib, Jubbadda Dhexe.